ကိုယ်ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ Martech Zone
တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ 12 ရက်၊ 2012 ခုနှစ် စနေနေ့, နိုဝင်ဘာလ 10, 2012 Douglas Karr
ဖောက်သည်များထံမှထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့် ၀ ယ်ယူသူစိတ်ကျေနပ်မှုတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာဖောက်သည်များသူတို့ကိုယ်သူတို့ကူညီရန်အထောက်အကူပြုသောအကြောင်းအရာများကိုထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်များ၏စိတ်ကျေနပ်မှုကိုတိုးတက်စေရုံသာမကသင်၏ဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုလိုင်းများကိုချည်နှောင်ခြင်းမရှိသောဖောက်သည်များနှင့်တိုက်ရိုက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်။ သင်၏ဗဟုသုတအခြေအနေကိုထုတ်ဝေခြင်း၊ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ၊ အတိုကောက်များနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များက၎င်းတို့ကိုရှာတွေ့နိုင်သည့်ဥပမာများထုတ်လွှင့်ခြင်းက၎င်းတို့အားပြိုင်ဘက်များရှာဖွေတွေ့ရှိမည်ကိုကြောက်သောကြောင့်သူတို့ကိုလော့အင်နောက်ကွယ်မှချခြင်းမဟုတ်ပါ။
လတ်တလောလေ့လာမှုများကသုံးစွဲသူများသည်အထောက်အပံ့ကိုယ်စားလှယ်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းထက်မိမိကိုယ်ကိုဝန်ဆောင်မှုကိုပိုနှစ်သက်ကြသည်ဟုဆိုကြသည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များအရသိသာထင်ရှားသည့် ၉၁% က၎င်းတို့လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီလျှင်ဗဟုသုတအခြေခံကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုပြောကြသည်။ ဤသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကြီးစွာသောသတင်းဖြစ်၏ Self-service သည်သုံးစွဲသူများကိုထောက်ပံ့ရန်အမြန်ဆုံးနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Zendesk ၏အချက်အလက်ဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများ ပိုမိုသောအသိဥာဏ်ရှိသောကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေပါ
နိုဝင်ဘာလ 12 ရက် 2012 ခုနှစ် ညနေ 3:23 နာရီ
ဒါက ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အရာပါ။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် အသိပညာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကိုယ်တိုင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် အမျိုးသားတစ်ဦးထံမှ အမြန်တုံ့ပြန်မှုအချို့
1. Oracle သည် SEO အကြောင်း ကဏ္ဍတွင် ကိုးကားပြီး ဝဘ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များမှတဆင့် သင့်အကြောင်းအရာကို မျှဝေခြင်းမှာ အနည်းငယ် ကမောက်ကမဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် Google et al မှတဆင့် အသိပညာအခြေခံအကြောင်းအရာများကို မမျှဝေသော B2B ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်သားဖွယ်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၊ ပိုကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ပိုဆိုးသည်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ အကောင့်ဝင်ခြင်းနောက်ကွယ်တွင် ၎င်းတို့၏ KB အကြောင်းအရာကို လော့ခ်ချထားသည်။
2. ကျွန်ုပ်၏ဒေတာသည် အလွန်ကွာခြားပါသည် — “40% သည် ကိုယ်တိုင်ဝန်ဆောင်မှုပြီးနောက် အဆက်အသွယ်စင်တာသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမည်” ထက် များစွာနိမ့်ပါသည်။ Amazon၊ Microsoft စသည်တို့တွင် သင်၏ကိုယ်ပိုင် B2C အတွေ့အကြုံကို သင်စဉ်းစားပါက၊ ၎င်းသည် ပြင်းအားအမှာစာများ အလွန်မြင့်မားကြောင်း သင်တွေ့နိုင်သည်။ သို့သော် B2B ပတ်ဝန်းကျင်များတွင်ပင်၊ ဝဘ်ဆိုက်ရှိ ပမာဏသည် ပံ့ပိုးမှုစင်တာရှိ ပမာဏ 10x – 30x သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုပါသည်။
3. Gartner သည် virtual အေးဂျင့်များအကြောင်း မှားသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ (70% ဖြစ်နိုင်ချေ) 🙂
နိုဝင်ဘာလ 12 ရက် 2012 ခုနှစ် ညနေ 4:17 နာရီ
Penguin&Panda အပ်ဒိတ်လုပ်ပြီးနောက် အကြောင်းအရာသည် ဘုရင်ဖြစ်သည်။ သင်၏ အသိပညာအခြေခံကို ထုတ်ဝေခြင်းသည် သင်၏ SEO ကို အားကောင်းစေမည်ဖြစ်သည်။